မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ လူငယ်များ စုစည်း၍ လူငယ်ရေးရာ မူဝါဒ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး မ? - Yangon Media Group
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခန်းကဏ္ဍအသီးသီးမှ လူငယ်ရေးရာမူဝါဒကို စိတ်ဝင်စားသောလူငယ်များ စုစည်း၍ လူငယ်ရေးရာမူဝါဒ အကောင်အထည်ဖော် နိုင်ရေး မဟာဗျူဟာရေးဆွဲနိုင်ရေးကို မတ် ၁၂ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထိ နေ့စဉ် နံနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၄ နာရီအထိ မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၂၆ လမ်းနှင့် ၇၁ လမ်းထောင့်ရှိ မြို့တော်ခန်းမ၌ ဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
”လူငယ်မူဝါဒ အတည်ပြုပြီးတဲ့နောက် လူငယ်မူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့၊ လူငယ်မူဝါဒကို လူငယ်တွေကို ပြန်လည်မိတ်ဆက် ပေးဖို့၊ တိုင်းလူငယ်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ ဒီနေ့ ဆွေးနွေးကြတာပါ။ တိုင်းလူငယ်ကော်မတီဖွဲ့ပြီး လူငယ်ရေးရာမူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ဗျူဟာရေးဆွဲသွားမှာဖြစ် ပါတယ်။ လူငယ်ရေးရာမူဝါဒ ပေါ်ပေါက်လာ ပြီးနောက် လူငယ်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်က လူငယ်တွေကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလာတယ်။ အခု မဟာဗျူဟာ ရေးဆွဲပြီး အကောင်အထည်ဖော်လာရင် လူငယ်တွေ ဘာတွေ ဘာလိုပြောင်းလဲသွားမလဲ ဖြစ်ပေါ်လာမှာပါ”ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီး လူငယ်ရေးရာမူဝါဒ ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင် ကိုလင်းသီဟက ပြောသည်။
လူငယ်ရေးရာမူဝါဒသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိ လူငယ်များ၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာ ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု။ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနာဂတ်အလား အလာကောင်းများကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့် မဟာဗျူဟာလမ်းညွှန်ချက်များကို နိုင်ငံတော်နှင့် သက်ဆိုင်သူများအားလုံးမှ သန္နိဋ္ဌာန်ချ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များ၊ ပံ့ပိုးမှုများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို စနစ်တကျ ဖော်ညွှန်းထားသော မူဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
”လူငယ်ရေးရာမူဝါဒကို ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် အတည်ပြုကြေညာမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီမူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ လူငယ် တွေ အားတွေလိုသလို အစိုးရဝန်ကြီးဌာန တွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေလိုပါတယ်”ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လူငယ်ရေးရာမူဝါဒ ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ ဘဏ္ဍာရေးမှူး မစူးရှရှင်းသန့်က ပြောသည်။ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်း အရာသန်းခေါင်စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ ၁၇ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်း မှာ အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်ကြားရှိ လူငယ်များဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၂၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အသက် ၁ဝ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အကြားရှိ လူငယ်နှင့် ဆယ်ကျော်သက်များဖြစ်သည်။
လက်ရှိ လူငယ်နှင့် ဆယ်ကျော်သက်အများစုမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ ကျား၊ မ လူမှုကွာဟမှု၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမမီမှု၊ နိမ့်ကျ သောကျန်းမာရေး၊ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါနှင့် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီအန္တရာယ်၊ အဆင်သင့်မဖြစ်သောကိုယ်ဝန် ဆောင်ရခြင်း၊ မသန်စွမ်းမှု၊ လုံခြုံမှုမရှိသော နေရာထိုင်ခင်း၊ အကြမ်း ဖက်မှုများနှင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အလုပ်အကိုင်မရရှိခြင်း စသည့်ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်လျက်ရှိရာ အဆိုပါကိစ္စများအား ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် လူငယ်ရေးရာမူဝါဒ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေး အထွေထွေ ရောဂါကုဆေးရုံကြီး နှလုံးရောဂါ အထူးကုဌာနတွင် ခြောက်နှစ်အတွင်း အရေးပေါ် နှလုံ??
ခြေချင်းဝတ်ဒဏ်ရာကြောင့် လီဗာပူးကွင်းလယ်လူဝီနယ်ဒန် ဝက်စ်ဟမ်းနှင့်ပွဲကို လွဲချော်ဖွယ်ရှိ